Nke ebe mma na-enwe Pizza karịa mba nke na mepụtara ya, nri? Ịtali ịhụnanya, n'anya, a n'anya na-atọ ụtọ nri-tụgharịa-nri! Sịkwa pizzas na Italy na-ghọọ a dị ọcha ụdị art, na-emesị UNESCO nwapụtara! Agagharị gburugburu Italy, you’ll find pizzerias opened in…
Ọ bụrụ na ị na-a solo njem na-amasị gị na-azụ njem dị ka a nomad, mgbe ahụ ị na-na na na-nri ebe. Train-ejegharị ejegharị bụ onye nke kasị mma ụzọ njem site Europe ọ bụrụ na ị chọrọ na-enweta ihe niile na Europe nwere na-enye. Nwee…
Ime ka ọtụtụ n'ime oyi na-atụ oge site na ịga na Best Winter ememme na Europe. The ememme abuana ihe niile si ski na snowboarding ka music, ntochi, ice ọkpụkpụ, na-egbuke ngagharingosi parades. N'okpuru bụ anyị n'elu 5 roundup of what you’ll find happening across Europe…